Chipiri, Kukadzi 09, 2016 Local time: 19:47
HARARE— Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu, re International Human Rights Day, hurumende ichiti zvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekumadokero, zviri kuvhiringidza hurongwa hwavo hwezvekodzero dzevanhu.
Vatiwo Zimbabwe yapasisa mutemo weZimbabwe Human Rights Act uyo unoita kuti komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission ishande. Vachitaurawo pachiitiko ichi, mukuru wemadzishe munyika, VaFortune Charumbira, vatiwo kunyange hazvo pachifanira kuve nekodzero dzekufamba, kuita misangano nekuita zvimwe, panofanirawo kuve nekodzero dzekuti vanhu vawane hupfumi hwenyika.
Nhengo dzeZCTU dzakawanda dzinondzi dzapinda mumigwagwa yemuBulawayo dzichiratidzipa pamusana pekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye dzevashandi. VaMcijo vaudza Studio7 kuti vambochengetedzwa kwenguva pfupi vakazoregedzwa mushure mekunge mapurisa aona kuti vanga vaine mvumo yekuratidzira.